Akanjo rotsakorana, Ponco orana, Sarimihetsika plastika - Tengxing
Hamaky bebe kokoaGO
Niorina tamin'ny 1991, Tengxing Plastic Fashion Group dia mpanamboatra matihanina ampiarahina amin'ireo orinasam-barotra anatiny sy iraisampirenena miompana amin'ny vokatra plastika sy zazakely. Ny foiben-toeranay dia miorina eo akaikin'ny tetezana Zhaozhou tsara tarehy izay lova manan-tantara sy ara-kolontsaina fanta-daza any Shina, aiza ihany no 300km mankany Beijing, renivohitr'i Sina, manodidina ny 280km mankany Xingang, seranan-tsambo lehibe indrindra any Shina Avaratra.
Ny vokatray dia mandeha amin'ny firenena maro toy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanan'i Azia, Afovoany Atsinanana, Afrika, Eoropa ary Amerika.
Diaper zaza mora v ...
fivarotana orinasa PEVA malefaka ...
Fampiroboroboana ny mpivarotra tsara indrindra ...
Waterproo amidy orinasa ...
Proteur fanosotra mora vidy indrindra ...
Ny vondrona lamaody plastika Tengxing dia natsangana tamin'ny 1991 niaraka tamin'ny renivola voasoratra $ 1 tapitrisa. Izy io dia mpanamboatra matihanina mampiditra varotra anatiny sy iraisam-pirenena, manokana amin'ny famokarana vokatra plastika sy zazakely. Ny seranana fivarotana lehibe indrindra any avaratr'i Sina, ny Tengxing Group dia miorina tsara ho tetezana manerantany
Ny tahan'ny fanondranana anay dia 90% -100%, ny tsena lehibe dia any Afrika, Amerika, Azia, Eropa, Moyen Orient, Eropa Avaratra, Oceania, tsena hafa, Eropa Andrefana, manerantany, Eoropa Atsinanana ary faritra hafa
Ny olona mifototra ary miorina amin'ny fahamendrehana dia ny foto-kevitray mandrakizay .Ny hevitra momba ny kalitaon'ny vokatra faran'izay tsara sy ny fifehezana dia nahazo laza malaza manerantany.
Misy orinasa mpamokatra indostrialy telo an'ny renim-pianakaviana. Izy ireo dia toy ny Zhaoxian Plastic Factory, Ningjing Plastic Film Factory ary Pingquan Yadong Plastic Fashion Co., Ltd.
Izahay efa nandalo CE, ISO fanamarinana, SGS, EN71 sy ny fitsipiky ny fenitra eropeana hafa, mampiseho tanteraka fa ny kalitaon'ny vokatray mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra fanondranana eoropeana
avy amin'ny adminOct-29-2020